Mitady Mpiandraikitra Sora-miafina Tsy Miasa Mandritra Ny Andro Iray Manontolo ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Mitady Mpiandraikitra Sora-miafina Tsy Miasa Mandritra Ny Andro Iray Manontolo ny Global Voices
Voadika ny 20 Novambra 2018 2:41 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2013)
Mitady mpanamboatra sy mpiandraikitry sora-miafina amin'ny tranonkala izay tsy miasa mandritra ny andro iray manontolo ny Global Voices mba hanampiana amin'ny fitazonana sy fanavaozana ireo WordPress sy tranonkalanay mifototra amin'ny LAMP, miara-miasa akaiky amin'ny mpiandraikitra voalohany ny sora-miafina ato aminay.
Tokony hanana traikefa amin'ny bikabika sy fanoratra miafina ho an'ny WordPress ireo kandidà idealy amin'izany, anizan'izany ny ventinkevitra sy ny plugin API.
Tsy misy fepetra ara-jeografila miaraka amin'ity toerana ity. Fikambanana virtoaly tsy manana birao ny Global Voices. Tokony hahay hifehy tena ary afaky ny hanefa ny andraikiny amin'ny alalan'ny torohevitra vitsy ireo kandidà, fa ihany koa, afaka ny hiara-hiasa avy lavitra miaraka amin'ny ekipan'ny Global Voices.
FAHAIZANA TSY MAINTSY ANANANA
HTML (XHTML/HTML 5)
Bikabika sy fitantanana WordPress
Famokarana plugin WordPress
Famokarana ventninkevitra WordPress
CSS misosa/mailaka famaly
Fanaraha-maso ny dika (Git/SVN)
Fampidirana ny famokarana ho amin'ny finday sy tablety
Tena raisinay an-tànan-droa tsara ireo kandidà avy any ivelan'i Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana, ary mandrisika ireo olona miasa ao amin'ny tetikasa Global Voices amin'izao fotoana izao mba hisoratra anarana.
Raha liana ianao, mandefasa CV sy taratasy milaza fahalianana manazava ny mahatonga anao ho kandidà tsara ho an'ilay asa amin'ny: adminjob AT globalvoicesonline DOT org tsy taran'ny amin'ny 4 Martsa 2013.